ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုအား စင်္ကာပူနိုင်ငံ PWC Advisory Services Pte. Ltd နှင့် International Glass Co., Ltd. တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံ | Ministry of Industry
Wed, 08/24/2016 - 09:34 -- Myat Thee
PWC Advisory Services Pte. Ltd နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် PWC မှ အာရှနှင့် အာရှအပြင်ဘက်နိုင်ငံများတွင် Capital Project and Infrastructure (CP&I) လုပ်ငန်းများအတွက် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ အတွက် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ Market Entry Advisory နှင့် အခြေခံအဆောက် အဦဆိုင်ရာ Infrastructure Advisory ပံ့ပိုးပေးနေမှုအခြေအနေများနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာနကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ စက်ရုံများအား ပုဂ္ဂလိကနှင့် အောင်မြင်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် စက်ရုံအမျိုးအစားအလိုက် Privatization Model များ သတ်မှတ်ရေးဆွဲနိုင်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါသည်။
International Glass Co., Ltd. နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အမှတ်(၃၆)အကြီးစားစက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)အား နှစ်ရှည်ငှားရမ်း၍ လက်ရှိထုတ်လုပ်နေသော Float Glass Process လိုင်းတွင် ထပ်တိုးစက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်၍ ဖန်ပုလင်း၊ ဖန်ခွက် စသည့် ဖန်ထည်ပစ္စည်းများ တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။